Nahoana i Delfín Quishpe, Vazimba Teratany, Mpihira No Tena Manintona Olona Be Any Amerika Latina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2016 13:44 GMT
Delfín Quishpe. Dikasary avy tamin'ny iray amin'ireo hirany zaraina ao amin'ny YouTube.
Maro amin'ireo any Amerika Latina no efa naheno an'io mpihira io, na farafaharatsiny efa nahita ny lahatsariny tao amin'ny Aterineto. Hatramin'ny fanombohan'ny asany amin'ny maha mpanao mozika azy, mpitroatra i Delfín Quishpe tamin'ny safidiny amin'ny fiakanjo sy mozika. Ny hira izay nampalaza be azy tao amin'ny Aterineto sy nampalaza azy tao anatiny ary tany ivelan'i Ekoatora dia ny Torres Gemelas, na “Twin Towers” (Tilikambo Kambana) amin'ny teny Anglisy. Amin'io hira io, mitantara ny tantaran'ny sipany i Delfín, sipany izay nandeha tany Etazonia ary avy eo matin'ireo fanafihan'ny 11 Septambra 2001. “Iza no mahalala ny marina? Iza no nanao io, ary nahoana izy ireo no nanao io?” Manontany tena i Delfín eny antsefantsefan'ilay rakitsarin'ny hirany. Ireny fanontaniana ireny no noeritreretin'ireo olona an-tapitrisany hatramin'ny nitrangan'ny herisetra, saingy nahazoany fanadrohadroana be anefa io hira io.
Misy antony ny mahatonga an'io. Ny mozikany eo ankilany, niatrika fanamby iray i Delfín hatramin'ny nanombohany ny asany: ny maha-vazimba teratany azy sady nametraka ny maha-izy azy manokana.
Vazimba teratany ny fitambaran'ireo 7%-n'ny mponin'i Ekoatora, ary i Delfín, izay Quechua avy ao amin'ny faritra El Chimborazo, no mety ho iray amin'ireo tompondaka lehibe indrindra ao amin'ireo vondrona vazimba teratanin'ny firenena ao anatin'ny tontolon'ny mozika. Araka ny fitateran'i Delfín manokana ao amin'ny vavahadim-baovao Vice, tsy mba nomena fahafahana ho alefa tamin'ny radio na fahitalavitra ny Torres Gemelas noho ny mpanoratra azy “kely sy zarazara”. Nandany vola 1.500 dolara izy tamin'ny famokarany ny rakitsariny ary nisy namana iray nandroso hevitra azy hanandrana ny sehatra tsy andoavam-bola YouTube. Ankehitriny, manana mpijery 14.571.988 isa ny Torres Gemelas — ary tsy ny rakitsary tena izy akory aza izany, fa iray izay nalefan'ny mpampiasa YouTube iray mitondra ny anarana hoe Donmaco. Ny taona 2011, voatendrin'ny fahitalavitra MTV Latin America ho “Olo-malazan'ny Vohikala nandritry ny Taona” izy, ary ny taona 2012, nandray anjara tamin'ny fandefasana faharoan'ny YouFest izay nankalazàna tany Madrid.
‘Rehefa Mijanona ny Horohorontany’
Nahatonga resaka be indray tato ho ato i Delfín tao amin'ny fiarahamonina Amerikana Latina tamin'ny fihiràny ilay hira Cuando Pase el Temblor (“Rehefa Mijanona ny Horohorontany”), izay an'ilay vondrona Arzantina malaza Soda Stereo. Delfín, ankehitriny fantatra ho mpamorona ny “Andean Techno-Folklore,” nanao ny fihiràny hiran'olon-kafa tao amin'ny fandaharana fahitalavitra Ekoatoriana, herinandro iray taorian'ny fitsingerenan'ny faharoa taonan'ny nahafatesan'i Gustavo Cerati, ilay Arzantina mpihira sady mpitarika ny Soda Stereo.
Araka efa nandrasana, nahazo fanehoankevitra manohana sy manaratsy ny zavabitany izy, ary nandritra ny andro maromaro, nampirongatra ny adihevitra momba ny tsara sy ratsy amin'ny lafiny mozika, ny zava-bitany. Nitovy tamin'ny zava-nitranga taona vitsivitsy lasa izay tamin'i Wendy Sulca izany, Peroviana mpihira mozika Andeana, ary ny fihiràny amin'ny fombany ny Like a Virgin (iray amin'ireo hira lehibe indrindran'ilay Amerikana mpihira, Madonna).
‘Mitsara izy ireo satria tsy mahalala’
Toy ny ahoana i Delfín any ambadik'ireo lahatsary YouTube? Ahoana ny andraisany ireo tsikera ? Taorian'ny herinandro nanandramana nifandray taminy ary nandefasana hafatra maro ho azy tamin'ny alalan'ny tambajotra sosialy, afaka nifanena tamin'ilay mpihira ihany ny Global Voices. Avy any amin'ny tanàna nahaterahany, Guamote (faritra Ekoadatoriana any amin'ny Faritanin'i Chimborazo), namaly fanontaniana maromaro izy.
GV: Oviana ianao no nanomboka ny mozikanao?
Delfín Quishpe (DQ): Efa nihira aho fony mbola zazalahy kely, fa tamin'ny sehatra matianina, nanomboka nihira aho hatramin'ny taona 2000. Tamin'izany taona izany, namokatra ny rakikirako voalohany aho, saingy tamin'ny famokarana fahatelo vao teraka ny lazan'ny Torres Gemelas; vitsy ireo olona mahalala hoe efa nomanina talohan'ny taona 2001 ny feonkiran'iny hira iny ary nantsoina hoe Cuando me voy a Guayaquil [“Rehefa mandeha any Guayaquil aho”].
GV: Nahazo olona maro niresaka azy ary fanehoana tamin'ny media ihany koa ny asanao farany, izay famerenana ny hiran'ny Soda Stereo, Cuando Pase el Temblor. Maro ireo manontany tena raha toa ianao nahalala io vondrona mpanao gadona rock io, izay iray amin'ireo manandanja lehibe indrindra tany Amerika Latina, nandritra ny fotoana nisinisy ihany.
DQ: Mpankafy Soda Stereo foana aho, ary ny maha Gustavo Cerati azy mihitsy teo amin'ny fiainana, ary tamin'izany, teraka ny fitiavako ara-mozika ho an'ireo mpanakanto iraisam-pirenena. Miaiky ilay Goatemateky mpandrindra , Ricardo Arjona, ihany koa aho, ary nanao fandraisampeo mihitsy ny hira song El Mojado [“Ny Wetback” (mando lamosina) — teny entina fanambaniana ilazàna ireo mpifindramonina any Etazonia] . Afaka hitanao ao amin'ny YouTube io.
GV: Ahoana ny eritreritrao amin'ireo tsikera azonao noho ny asanao farany?
DQ: Mino ny fahalalahana miteny aho. Samy afaka miteny izay any ambadiky ny lohany any daholo ny tsirairay, na inona io na inona, avy any anatiny any izany ary tsy manohina ahy izany na hoe mandranitra ahy. Olona mifantoka tanteraka amin'ny zavatra ataoko aho ary mankafy manao izay zavatra tiako.
GV: Mbola mitohy mahazo fanehoankevitra ihany ao amin'ny YouTube ny lahatsarin'ny “Twin Towers”, na dia efa 10 taona lasa aza no nalefa. Kanefa, tsy tsara daholo akory ireo fanehoankevitra rehetra. Ahoana ny fahatsapanao ny fandraisana ireo mpanakanto vazimba teratany ao Amerika Latina? Nahamarika fanavakavahana amin'ny zavatra ataonao ve ianao, na amin'ireo mpihira toa amin'i Wendy Sulca sy ny Tigresa del Oriente (mpanakanto hafa ao amin'ny YouTube, avy any Pero, izay lasa nalaza tamin'ny Aterineto ihany koa tao amin'ilay faritra)?
DQ: Tsy olana amiko mihitsy ny fiaviako sy ny maha-izaho ahy, satria mipetraka tsara ny maha-izaho ahy, ny maha-olom-pirenena ahy, ary ny kolontsaiko. Ekoatoriana mpihira aho, teratany Chimborazo. Ahoana moa aho no tokony harary saina amin'ny zavatra lazain'ny olona? Samy manana ny kolontsainy ny tsirairay. Izany no tiako ho azon'izy ireo, raha izany no tiany. Raha tsy izay, tsy misy idirako mihitsy izany. Manana ny fotokevitro mazava tsara hijoroako aho ary izany no mahatonga ahy tsy ho voadonan'ny tsikera. Tsy mahalala ny firenena ireo olona mpanavakavaka. Raha miteny mikasika ny taniben'i Amerika isika, misy kolontsaina, fomban-drazana, ary fiteny, an'arivony maro ao. Mifanaja izahay ary te- hanaja ireo rehetra te-hiasa saina amin'izany. Mitsara izy ireo satria tsy mahalala.
‘Na mizarazara be aza ireo hevitra, avy amin'ny fanavakavahana izy rehetra ireo’
Ivonne Lago, Guayaquiliana mpanangom-baovao miasa ho an'ny Diario Extra, ihany koa dia niresaka tamin'ny Global Voices ary nanome ny fijeriny mikasika ilay zavatra malaza, izay i Delfín Quishpe:
Na mizarazara be aza ireo hevitra, avy amin'ny fanavakavahana izy rehetra ireo. Mety hoe mbola eritreretina foana fa tokony mozika Andeana ihany no tokony ataon'ny teratany, amin'ny fampiasàna be ny sodina quenas [sodin'ny teratany], ary ny rondadores [sodina Ekoatoriana]. Kanefa, ny sasany amin'ireo fitaovana ireo afaka heno amin'ny hira tena izy nataon'i Cuando Pase el Temblor, nataon'i Cuzco, tanin'ny Fanjakana Inkà. Ary ireo hafa [manana hevitra tahaka izany] satria mahita an'i Cerati ho olona fakàn-tahaka izy ireo, olo-malaza, izay tsy mety ho faty ny hirany, na ratsy kokoa, hoe atao zavatra iray fihomehezana. Na mety tsy izany aza ny tao an-tsain'i Delfín, nahatonga tsikera sy hadrohadro ny hoe teratany nahasahy namerina ilay hira. Amiko, tsy nanao zavatra ratsy i Delfín. Tena voakaly tsara ilay izy ary vita tsara ihany koa ireo fandrindràna.
Miasa ho toy ny varavarankely lehibe ny Aterineto, mba hamakafakàna ny fandraisan'ny daholobe ny vontoaty. Ao amin'ny YouTube, mety ahitàna fanehoankevitra toy ny hoe “Delfín, tsy tokony ho Ekoatoriana ianao,” “Tsy fantatro hoe afaka mihira ihany koa ny vazimba teratany,” na “Ampio izahay Andriamanitra o, aza avela miverina mihira intsony i Delfín.”
Ny zava-misy, ankoatra ireo fitsaratsaram-poana, ankoatra ny lazaina ho mozika tsara na ratsy, tsara i Delfín ho an'ireo olona manafintohina. Asehon'io ny halehiben'ny fiheverana ny tena ho ambony na ho ambany noho ny hafa rehefa mikasika ireo fanakilasiana ny foko no resahantsika, na amin'izao andro izao aza.
Sary mivaky hoe: “Misaotra ny rehetra”